अधुराे प्रेम: यसरी टुंगियाे हाम्राे प्रेम | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
अधुराे प्रेम: यसरी टुंगियाे हाम्राे प्रेम
र, तेस्रो पटक च्याटठिएको स्वर आयो, ‘के हो आधा रातमा फोन गरेर मान्छेको निन्द्रा बिगार्ने? तपाईको बुद्धि छैन?’ रिसले कान तातो भयो। र, एउटा लामो म्यासेज पठाएँ, ‘हरेक रात सुत्नु अघि डायरी पल्टाउँछु, दैनिकी लेख्न खोज्दा पहिलो पानामा भएको तिम्रो नाम देख्छु। हत्तपत्त पाना पल्टाएर लेख्न शुरु गर्छु, तर अतीतका यादहरुले पछ्याउँछ। तिमीलार्इ भुल्न हरेक रात डायरी अधुरो लेख्दै बन्द गरी सुत्छु। तर, यो निद्रा पनि तिमी जस्तै धोकेबाज!
धेरै महिना भएछ, दैनिकी नलेखेको। लेखौं पनि कसरी? उनीसँग च्याट गर्दागर्दै निदाउँने बानी परेको थियो। आज मेरा अक्षरहरु लर्बराइरहेछन्। तर, अक्षरभन्दा धेरै मेरा भावनाहरु लर्बराइरहेछन् । २०६९/०८/२७ (दैनिकी)
र, उपचार उतै गर्न उनी सदाका लागि अमेरिका गएको थाहा पाएँ। त्यसपछि उनको अत्तोपत्तो छैन। अर्को साल मेरो मागि विवाह हजुरसँग भयो। हामीले यी कुरा कहिल्यै गरेनौं। र, सुखी जीवन जिउँदैछौँ। जुन सम्बन्धमा विश्वास हुँदैन, त्यो सजिलै टुट्छ, र आक्रोशमा बोलेका शब्द सुनेर कसैको चरित्रको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन ।